Maxaad Ka Taqaan Dagaalkii 1977-78 ee Soomaaliya iyo Itoobiya? | Saadaal Media	Wednesday, March 12th, 2014	Home
Maxaad Ka Taqaan Dagaalkii 1977-78 ee Soomaaliya iyo Itoobiya?
Nov 21, 2013 - 9 Jawaabood	Share(Laga soo xigtay buugga qoraha Abdiweli Hassan (abdihass55@hotmail.com), ‘Maxaa Hortaagan Dawladnimada Soomaaliya? Geeska Afrika & Danaha Is-diidan’. ISBN 9966-05-189-9).
Dagaalkii Soomaaliya iyo Itoobiya dhexmaray sannadihii 1970-naadkii wuxuu ahaa dagaalkii ugu waynaa ee ka dhexdhaca laba dawladood oo Afrikaan ah taariikhda casriga ah, iyadoo saamayntiisu ay gaartay Afar qaaradood ee Caalamka. Yurub waxay inta badan la safteen dhaqaale, iyo milateri iyo siyaasad ahaanba dawladdii Itoobiya, gaar ahaan dawladihii Midowgii Soofiyeeti iyo xulufadii Waarso, dhinaca kale Kuuba iyo dawladahii shuuciga ahaa ee qaaradda Ameerika waxay si toos ah uga dagaalamayeen safka hore ee dagaalka, iyadoo waddamada Carabta iyo Aasiyaba ay qaarna la safteen Soomaaliya qaarna Itoobiya. Faahfaahinta dagaalkaas waxaan isku dayi doonaa inaan soo bandhigo macluumaad badan balse aan dhammaystirnayn, iyadoo xogta laga qoray dagaalkan ay aad u yar tahay, midda la hayaana ay dhinacyadu wax badan buun-buuniyeen. Xogtani waa mid laga soo aruuriyay dokumentiyo iyo qaab waraysi saraakiishii iyo askartii dagaalka ka qayb gashay ka mid ah. Xogtu marna ma dhammaystirna, qaladna waa ku jiri karaa, waxaana loo baahnaan doonaa xog sax ah oo laga sameeyo dokumenti. Dagaalkan waxay Soomaalidu si fiican u isticmaashay awoodda qalabka milateri ee taankiyada, madaafiicda, diyaaradaha dagaalka, iyo taktikada ciidamada. Waxaa muuqata in istiraatijiyadda dagaalka ay u habaysnayd in dagaalka ay Soomaalidu ku guulaysato muddo kooban oo ilaa lix bilood ah. Hase yeeshee, faragelintii shisheeye iyo ka soo qayb-galkii milateri waddamada Kuuba, Ruushka, Liibiya, Waqooyiga Yemen, iyo Quwadihii Waarso waxay badaleen qaabkii dagaalka, waxayna Soomaalidii ku qasabtay inay ka soo baxaan dhammaan goobihii ay ka qabsadeen Itoobiya muddo gaaban, arrintaas oo wax wayn ka badashay mustaqbalka siyaasadda Geeska Afrika iyo gaar ahaan Soomaaliya.
Qaabkii Dagaalku u Dhacay:
Dagaalkii ka dhex dhacay labada waddan waxaa caalamka looga aqoonsaday Dagaalkii Ogaden, sababtoo ah dhulka la isku hayay iyo goobta si fiican dagaalka la isugu fara saaray oo halkaas u badnaa. Dagaalkaas Soomaalidu way ka awood badnayd ciidanka Itoobiya, in kasta oo xagga tirada ciidanka ay Itoobiyaanku badnaayeen. Taas waxaa dheeraa hubka Itoobiyaanku wuxuu ahaa mid gaboobay oo ka hooseeya kan Soomaalida. Soomaalidu waxay haysatay saddex meelood in ka badan oo Taanki (250T-35 iyo T-55) halka Itoobiyaanku haysteen nooca Taanki M-14 iyo M-47, iyadoo Soomaalidu haysatay laba meelood in ka badan marka loo eego kuwa Itoobiya oo gaadiidka ciidanka qaada (APC). Waxaa la sheegay, in kasta oo xogta saxda ah aanan halkan ku xaqiijin karin, in Soomaalidu ay goobta dagaalka ku haysatay 23 guuto oo hubka iyo gaadiidka hubku saaran yahay ah, 9 guuto oo ciidan taanki ah, 9 guuto oo ciidan arteleri ah, iyo 4 guuto oo ciidanka lidka diyaaradaha ku hubaysan ah.
Halka ciidanka Itoobiya uu ahaa mid kala firirsan oo aan iska caabin karin awoodda mishiin ee Ciidamada Xoogga Dalka Soomaaliya.
Dhinaca Siyaasadda, awoodda dawladda ee Addis Ababa waxaa ka socday isku haysad badan oo ka dhexeeyay ciidanka kaddib markii la dilay Boqorkii Xayle Selaase, iyadoo dhinaca kalena uu dagaal jabhadeed oo xooggan uga furnaa waqooyiga, halkaas oo jabhadihii Eritereeya qabsadeen gobollo badan, halka Cafarta, Oromada iyo Tikreegu ay gobolladooda ka wadeen dagaallo goos-goos ah. Dhinaca kale Saaxiibkii waynaa ee Itoobiya oo ah waddanka Maraykanka wuxuu ka joojiyay hubkii uu siin jiray Itoobiya, kaddib af-gembigii Mengistu Hayle Maryam kula wareegay talada Itoobiya. Sidaas darteed, istiraatijiyad iyo milateri ahaanba Dawladdii Soomaaliya waxay u arkaysay in waqtigani yahay kan ugu habboon ee in la soo celiyo ay tahay dhulka ku maqan Itoobiya.
Dagaalka jabhadaha Soomaalidu ay ka samaynayeen gudaha dhulka Soomaalida Itoobiya wuxuu si fiican u bilowday isla markiiba kaddib markii ay Soomaaliya ka dagtay wareeggeedii xukunka Ururka Midowga Afrika. Dawladdii Soomaaliya waxay tababar iyo hubayn u samaysay Jabhaddii Xoraynta Soomaali-Galbeed iyo Jabhaddii Xoraynta Somali-Abo. Sidoo kale waxay taageeraysay jabhadihii Eritereeya ka dagaalamayay, iyo kuwii Tigreey iyo Oroma ka dagaalamayay. Dagaalkii jabhaduhu wuxuu ku fiday gobollada Hararghe, koonfur-bari Bali iyo Siidaamo, iyagoo ku guulaystay inay burburiyaan awoodda ciidamada booliiska, milateriga iyo isku socodka maamulka ee gobolladaas. Waxay isugu keeneen ciidamadii Itoobiya inay ku soo aruuraan saldhigyada waawayn ee Milateri iyo magaalooyinka. Shacabka degaannadaas waxay si xad dhaaf ah u soo dhawaynayeen jabhadaha Soomaali-Galbeed iyo Soomaali-Abo. Horraantii 1977-kii Jabhaduhu waxay gacanta ku dhigeen inta badan Dhulka Soomaali-Galbeed iyo Siidaamo, in kasta oo maamul ahaan aysan samayn isbedel wayn. Waxay awooddaas ku gaareen taktikada ah ku dhufo oo ka dhaqaaq, iyagoo garaacayay meelaha ciidamada Itoobiya ka jilicsan yihiin, kaddibna shacabka oo taageersanaa dhexgalayay. Taktikadaasi waxay ku qasabtay in ciidamadii Itoobiya ku uruuraan saldhigyo gaar ah oo aysan si xor ah ugu socdaali karin dhulka Soomaali-galbeed iyo Siidaamo-Baali. Bartamihii 1977-kii dagaalku wuxuu u jihaystay mid ciidamada milateriga caadiga ah ee Jamhuuriyadda Soomaaliya iyo kan Itoobiya u bilowda. Milateriga Itoobiya waxay istiraatijiyad ka dhigteen inay nafteed hurinnimo sameeyaan inta ay ka helayaan gurmad saaxiibadooda caalamka ah. Waxay qiyaaseen in ciidamada Soomaaliya ay laba aag ka soo weerari karaan, in kasta oo aysan sheegi karin inay soo marayaan dhinaca waqooyi ama koonfureed ee Soomaaliya. Waxay go’aansadeen inay ciidankooda ugu muhiimsan isugu geeyaan aagga Jigjiga. Waxay sidaas u yeeleen maadaama magaaladaasi ku taallo meelo waddooyinka magaalooyinku isaga yimaadaan, ahna goob istiraatiji u ah magaalooyinka waawayn ee Bariga Itoobiya. Dhinaca kale, Soomaalida laftigeedu waxay arkayeen isla muhiimadaas ay Jigjiga leedahay. Balse waxay markii hore qabsadeen gobollada bariga iyo koonfurta Soomaali-galbeed, ay ku jirto saldhigga wayn ee Godey. Waxaa la sheegaa in dagaalkii Itoobiya iyo Soomaaliya uu si guud u bilowday 13-kii Juulaay 1977, in kasta oo dadka qaar ay yiraahdaan wuxuu bilowday 23-kii Juulaay.
Haddaba ciidamadii Itoobiya ee dagaalkii 1977-kii waxay noqdeen kuwa cagta la mariyo oo aan hakan ilaa Dire-Dawa. Dagaalkii wuxuu si dhaqso ah isugu soo aruuray saddex-geesoodka Dire-Dawa—Harar—Jigjiga. Waxay Itoobiyaanku ku dadaalayeen inay difaacaan meelahaas, wixii ay awood lahaayeena isugu geeyeen, maadaama xaruntooda kaydka ciidan iyo saanad ay ahayd Dire-Dawa, isla markaana ay maraysay waddada xadiidka tareenka ee ku xirta Jabuuti. Bartamihii Agoosto Ciidamada Soomaaliyeed waxay ku qaadeen dagaalkoodii qaybtii labaad ee xoogganaa magaalada Dire-Dawa. Markiiba Soomaalidu waxay gudaha u galeen Magaalada, iyagoo taktiko milateri oo aysan filayn Itoobiyaanku ku sameeyay, sababtoo ah waxay u malaynayeen in Soomaalidu qabsan doonto marka hore Jig-jiga. Dagaalka Dire-Dawa wuxuu ahaa mid aad culus oo faraha la iskula tagay, iyadoo Soomaalidu u awood sheegatay ciidamadii Itoobiya. Balse dhinaca cirka ayuu dagaalku isu rogay, iyadoo ciidamada cirka ee Itoobiya ay si aad ah uga qayb qaateen dagaalkaas. Ciidamada Cirka Soomaaliyeed waxay ku dagaalamayeen Diyaaradaha Ruushka ee MIG, halka Ciidamada Cirka Itoobiya ay ku dagaalamayeen diyaaradaha Maraykanka ee F5. Waxaa awoodda cirka ku yeeshay Ciidamada Cirka Itoobiya, halkaas oo mooraalka ciidamada Itoobiya ku soo noolaaday, kan Soomaaliduna hoos ugu dhacay. Waxaa la yaab noqotay, sida ka muuqata taariikhda laga hayo dagaalka Dire-Dawa, in ciidamada Soomaalida oo si muquunis ah uga xoog roonaaday kuwa Itoobiya muddo kooban in haddana aysan isticmaalin awood intii loo baahnaa oo ay haysteen, si ay cagta u mariyaan difaaca Itoobiyaanka, oo aysan siin fursad ay isku abaabulaan. Soomaalidu ma isticmaalin awood intii loo baahnaa, waxaana aad u liitay isku-xirka qaybaha kala duwan ee ciidanka milateriga Soomaaliyeed ee ka dagaalamayay aagga Dire-Dawa, sida ciidanka lugta, ciidanka taankiga iyo ciidanka cirka. Intaa waxaa dheer markii Itoobiyaanku dib isku soo abaabuleen oo arrintu qaraaraatay, dagaalkuna aad u xumaaday, ciidamada Soomaaliyeed ma helin gurmad deg-deg ah, halkaasna waxay ku lumiyeen awooddii milateri ee Dire-Dawa. Sababta keentay cilladahaas oo idil waxaan u daynayaa taariikhyahannada milateri inay ka faalloodaan.
Dagaalka qaybtiisii saddexaad waxay Soomaalidu markan ku fureen Jigjiga, dhammaadkii Agoosto, in kasta oo ay hore u qabsadeen dhulka u dhow oo idil. Arrintan taktikada dagaal ee dib loogu dhigay qabsashada Jigjiga, loogana hormariyay Dire-Dawa oo gudaha uga sii jirta dhinaca Addis Ababa, ma helin xog ii sababaysa, balse waxaa looga fadhiyaa hoggaamiyeyaashii milateri ee dagaalka inay soo bandhigaan. Dib u dhigiddani iyo jabkii ciidamada Soomaaliyeed ee Dire-Dawa wuxuu fursad aad u wayn siiyay ciidamada Itoobiya oo markii hore naf lacaari ahaa. Dagaalka Jigjiga wuxuu qaatay waqti ka dheer dagaalladii kale, iyadoo laba jeer la kala qabsaday, kaasoo gaaray ilaa bartamihii Sebteember halkaas oo ciidamadii Soomaaliyeed u xoog sheegteen kuwii Itoobiya, iyadoo Ciidamadii Itoobiya u gurteen dhinaca Kaaramadha, halkaas oo laga sii saaray. Markii dharbaaxadaas culus ku dhacday difaacii ugu adkaa ciidamada Itoobiya ayaa Mengistu Xayle Maryam, hoggaamiyihii Itoobiya, go’aansaday inuu tago furinta dagaalka si uu u dhiso mooraalka ciidanka, ugana qayb qaato abaabulka iyo dib u celinta ciidamada soo cararay. Wuxuu tagay Harar, balse markii uu arkay in dagaalku ku soo siqayo ayuu ku laabtay Addis Ababa, si uu ugu qaylo dhaansado saaxiibadiis waddamada caalamka. Ciidamadii Soomaaliyeed waxay ka gubeen ciidamada Itoobiya gaadiid ciidan aad u fara badan, iyagoo ka qabsaday taankiyo iyo baabuurta kale ee dagaalka. Halkaas ayaa guushii ugu waynayd ee dagaalka ku raacday ciidamadii Soomaaliyeed iyagoo ka talinayay dhulka Soomaali-Galbeed muddo dhawr bilood ah. Dagaalku markan wuxuu u jihaystay dhinaca Addis Ababa, halkaas oo Itoobiyaanku isugu geeyeen waddooyinka soo gala dhammaan wixii awood ay lahaayeen. Waxay difaacooda ku xoojiyeen labada waddo ee waawayn ee Hawaash ilaa Casab iyo Hawaash ilaa Harar. Dagaalku wuxuu si xoog leh ugu fiday aagaga Harar, Dire-Dawa ilaa waddada gasha Hawaash.
Hase yeeshee, markii ay ciidamada Soomaalidu u jihaysteen dhinaca Addis Ababa waxaa dagaalka si toos ah u soo galay ciidamada quwaddii Midowga Soofiteei, Yemen, Kuuba, Liibiya, iyo kuwa kale. Dawladdii Midowgii Soofiyeeti oo Soomaalidu xariirka u jartay bartamihii Noofeember 1977-kii, laga saaray Soomaaliya, ayaa waxay si toos ah uga soo jeesteen dhinaca Itoobiya. Waxay siiyeen Itoobiya wax kasta oo lagu jabin karo ciidamada Soomaaliya, dhaqaale, milateri, siyaasad iyo xariirka caalamkaba. Isla markiiba waxay Soofiyeetku u soo rareen Itoobiya diyaaradaha dagaalka ee MIG-17, MIG-21, taankiyada T-54 iyo T-55, helikoobtaro waawayn nooca Mi-6 iyo Mi-8, baabuurta waawayn BTR 152, noocyada gantaallada BM-21, gantaallada ka hortaga taankiyada, iyo hub noocyo kala duwan aad u fara badan, taasoo lagu qiyaasay adduun gaaraya balaayiin doolar. Ciidamada Soomaaliyeed oo Soofiyeetku soo tababaray, siiyay hubka ay ku dagaalamayaan intiisa badan, isla markaana yaqaan awoodda iyo qaab dagaalkooda, wuxuu si toos ah ugu hawlgalay burburintooda. Saraakiishii usbuucyo ka hor joogay dhinaca Soomaaliya ee Soofiyeetka ahaa waxay ka soo jeesteen dhinaca Itoobiya sida Jeneraal Grigory Barisov, iyo kuwa kale. Dhinaca kale waxaa dagaalka soo galay ciidamo Kuubaan ah oo gaaraya in ka badan 20,000 uu hoggaaminayay Jeneraal Arnaldo Ocha, ayna u dhan yihiin dhammaan hubka iyo saanadda ciidamadu, iyagoo ah awood aad u hubaysan. Waxay noqotay in Itoobiya ay heshay awood ciidan oo aad uga fara badan intii ay ka codsatay saaxiibadeed, halka Soomaalidu ay noqotay kaligeed in kasta oo dawladaha carabta qaarkood ka kaalmeeyeen dhinaca saadka. Dhinaca kale, maadaama ciidamada Soomaalidu ay gudaha u sii galeen Itoobiya, waxay dadwaynaha halkaas ku nooli noqdeen kuwa aan u soo dhawayn sidii dadwaynihii ay soo marayeen markii ay qabsanayeen dhulal badan oo Soomaali-Galbeed ah, iyadoo ciidanka Soomaaliduna uu sii galay dhul buuro dhaadheer leh, oo ku noqday caqabad. Ilaa dhammaadkii Jannaayo dagaalku wuxuu si aad ah uga socday Harar iyo dhinaca waddooyinka iyo buuralayda aadda Hawaash. Ciidamada Soomaaliyeed oo muujiyay dagaal aad u qaraar oo geesinnimo xad-dhaaf ah wadata, ayay waxay la dagaal galeen ciidamadii isbahaysiga, iyagoo muddo dhowr bilood ah ku dagaalamayay dagaal ka yaabiyay isla Soofiyeetkii soo tababaray Ciidamada Soomaaliyeed. Intaas kaddib ciidamadii isbahaysigu waxay xoojiyeen weeraradooda bilihii Diiseember, Jannaayo iyo Febraayo. Ugu dambayntii ciidamadii Soomaaliyeed waxay noqdeen kuwa la go’doomiyo oo xitaa diyaaradaha huwantu garaacaan xadka gobollada waqooyi ee Soomaaliyeed. Markii ay ciidamadii Soomaaliyeed muujiyeen dagaal aad u xirfadaysan ayay ciidamadii huwantu waxay go’aansadeen in la sameeyo istiraatijiyad cusub oo lagu jabiyo ciidamada Soomaaliyeed kaddib markii ay Soomaalidu fashilisay dhammaan istiraatijiyadihii ay huwantu ku dagaal galaysay. Waxaa la aasaasay Golaha Sare ee Istiraatijiyadda Milateri, kaasoo ka koobnaa saraakiil sare oo ah Itoobiya, Midowgii Soofiyeeti, iyo Kuuba uuna hoggaaminayay Jeneraal Vasilii Ivanovich Petrov, ahaana Taliye-ku-xigeenka koowaad ee ciidamada lugta ee USSR (Midowga Soofiyeeti). Laga bilaabo Febraayo, ciidamadii huwantu waxay si xaad dhaaf ah u soo weerareen ciidamadii Soomaaliyeed, iyagoo dhinac walba haystay wixii ay u baahdaan, halka ciidamada Soomaaliyeed ay ka muuqatay daal fara badan, saadkii oo ka sii gabaabsi noqday, iyo iyagoo aad ugu sii fogaaday furintii dagaalka.
Waxaa intaas dheeraa iyadoo isbahaysigii huwantu ay dhinaca xariirka caalamka uga dheereeyeen dawladdii Soomaaliyeed, una tuseen caalamka dawlad gardarro ku qabsatay Itoobiya. Dawlado yar maahane intii kale waxay si toos ah iyo si dadbanba u taageerayeen dawladdii Itoobiya. Dagaalku wuxuu si toos ah u dhexmaray ciidamada Kuuba iyo Ruushka oo dhinac ah iyo ciidamada Soomaaliya, halka Itoobiyaanku ay intoodii badnayd saaxadda ka baxeen, maleeshiyooyin cusubna ay meelaha laga qabsado Soomaalida dagayeen. Ciidamadii Soomaaliyeed waxay muujiyeen difaacid aad u adag dhammaan meelihii ay qabsadeen, gaar ahaan Jigjiga oo dagaalka ugu qaraar ay huwantu ku soo qaadeen. Kaddib markii ay ciidamadii huwantu jabin kari waayeen difaacii ciidamada Soomaaliyeed, waxay ku daabuleen ciidamo iyo hub diyaaradaha waawayn ee Soofiyeetka ee qaada hubka waawayn iyo ciidamada, nooca Mi-8. Waxayna ku daadiyeen ciidamo wax walba u dhan yihiin gadaasha dambe ee dhabarka ciidamada Soomaaliyeed, iyagoo isla markaana isugu darayay duqayn cirka ah iyo dagaal toos iyo gadaal lagaga keenayay ciidamada Soomaaliyeed. Diyaaradaha Ruushku waxay duqayn ba’an u gaysteen Hargaysa, iyo dekedda Berbera oo dhawr bilood ka hor u ahayd Soofiyeetka Saldhigga milateri ugu wayn ee ay halkaas ku lahaayeen, iyagoo ka hortagayay in gurmadka ciidamada Soomaaliyeed halkaas yimaado. Ciidamadii Soomaaliyeed ee Jigjiga difaacayay waxay muujiyeen geesinnimo xad-dhaaf ah, iyagoo aan haysan wax saad u imanayay, go’doon laga dhigay, lagana hub iyo ciidan badnaa. Ciidamadii Soomaaliyeed ee gudaha u galay Itoobiya waxay ku qasbanaadeen inay dib uga soo baxaan dhammaan goobihii ay qabsadeen, gaar ahaan Jigjiga oo ahayd halkii dagaalku ugu qaraaraa. Waxaa la isku raacay in haddii aysan sidaas yeelin la hareerayn lahaa, lana xasuuqi lahaa. Horraantii bishii Maarso Jigjiga waxay gacanta u gashay ciidamadii huwanta, iyadoo dawladdii Itoobiyana ay lama filaan ku noqotay guushaasi. Hoggaamiyihii Itoobiya Mengistu isagoo arrintaas ka hadlaya wuxuu yiri: “Guushani ma ahan mid kaliya Itoobiya u soo hoyatay, balse waa guul ay gaareen dhammaan shaqaalaha adduunka”. Intaa wixii ka dambeeyay dagaalku wuxuu isku rogay mid ah ciidamada Soomaalida oo guuraya iyo kuwa huwanta oo degaya goobihii dhulka Soomaali-galbeed ee hore ciidamada Soomaaliyeed u haysteen.
Marka dib loo qiimeeyo dagaalkaas, waxaa la dhihi karaa haddii Itoobiya aysan heli lahayn caawinta quwadaha shisheeye dhulka Soomaali-galbeed wuxuu ku jiri lahaa gacanta Soomaaliyeed. Waxaa kale oo la dhihi karaa caawinta quwadaha shisheeye waxay wax ka badashay siyaasaddii iyo nidaamkii dawladnimo ee Soomaaliya maadaama dagaalka ay ka dhasheen qasaarooyin fara badan, sida dhaqaalihii oo hoos u dhacay, xiriirkii caalamka oo wiiqmay, iyo jabhado qaab beeleed u habaysan oo ku kacay dawladdii Soomaaliya. Balse, sida ay meelo badan ku qireen Itoobiyaanka iyo Kuubaankuba, ciidamadii Soomaaliya ee ka dagaalamay Itoobiya waxay muujiyeen geesinnimo iyo hawl-karnimo xad dhaaf ah, taasoo keentay in meelo badan oo taariikhda ah lagu xuso in la yiraahdo: ‘waddankii Afrikaan ah ee isla hela inuu gaaro tababarka ciidamada cirka Itoobiya iyo tababarka ciidamadii dhulka Soomaaliya wuxuu dhisan karaa ciidamada lagu riyoodo ee Afrika’. Dadka qaar ayaa ku dooda in haddii ciidamada Soomaaliya ay ku ekaan lahaayeen kaliya dhulka loo yaqaan Ogaden, ay markaas si fiican u difaacan kari lahaayeen, balse markii ay ku sii fogaadeen gudaha buuralayda ee dhanka shishe ee Harar iyo Dire-Dawa, isla markaana quwado shisheeye soo galeen dagaalka waxay noqdeen kuwa aan hayn karin guulihii ay gaareen.
Dhinaca kale dagaalka waxaa culayskiisa looga awood sheegtay Soomaalida dhinaca cirka, in kasta oo Soomaalidu diyaarado badan oo cirka ka dagaal gala haysatay. In kasta oo diyaaradaha Itoobiyaanku ahaayeen kuwa Maraykanka kuwa Soomaaliduna ahaayen kuwa Ruushka, haddana dhinaca xirfadda iyo waayo-aragnimada ayaa la yiraahdaa ayaa sabab u noqon karay in Itoobiyaanku hawada ku gacan sareeyaan. Sida la og yahayna waqtigaas dagaalku dhacayo ciidamada cirka Itoobiya waxay dhisnaayeen muddo 30 sano ah halka kuwa Soomaalidu ay dhisnaayeen muddo 15 sano ah.
Dagaalkaasi wuxuu keenay in qaxooti fara badan oo Soomaali-Galbeed ahi ay yimaadaan Jamhuuriyadda Soomaaliya, kuwaasoo lagu qiyaasay sannadkii 1983kii hal milyan iyo bar (1,5 mily­an). Iyadoo 750.000 ka mid ah qaxootigaas ay ku noolaayeen xeryo qaxooti oo looga sameeyay gudaha Jamhuuriyadda Soomaali­ya, iyo 800.000 ka mid ah qaxootigaas oo ku kala firirsanaa waddanka gudihiisa iyagoo la noolaa qaraabadooda kale ee Soom­aaliya.
Dhinaca kale waxaa dawladdii ku kacay saraakiil sare oo ka tirsanayd ciidamadii dagaalkii Itoobiya iyo Soomaaliya, arrin­taas oo abuurtay xiisad gudaha milateriga dhexdiisa ah, hal­kaasna lagu laayay rag badan oo kacdoomay. Waxaa halkaa ka sii dhashay mucaarad hubaysan oo doonayay inay ridaan dawladdii milateriga/Hantiwadaagga ahayd. Mucaaradkaas oo kala samaysmay sannadihii 1979kii, 1982kii, 1985-90kii, waxay nasiib darro dhammaantood u habaysnaayeen qaab qabiil ama beeleed, iyagoo aan lahayn siyaasad midaysan oo hoggaamineed. Sidaas ayaana Soomaaliya ku gashay waji dib-u-dhac iyo burbur.
Fadlan Fikir kaaga Ha'ahaado Mid Bulshada Waxtar u leh Fikradaha Akhristayaasha (9)
DHAGAXTUUR says:	November 21, 2013 at 9:25 pm	ASC DHAMAAN
MAHAD ALLAAH AYAA LEH ,ABDIWALI ADIGANA MAHADSANID MAR HADAAD SOOMALI XASUUSISEY DAGAALKII XABASHIDA AMA ITOOBIYA.
ANIGA WAXAAN AAMINSANAHAY ITOOBIYA INEEY WILI NAGA HEYSATO DAD & DAL MARKII HORE XABASHI HADANA TIGREE OO BADALEY SIYAASADII XABASHI .
SABABTA LOO BADALEY SIYAASADA WAA BURBURKA SOOMAALI WEYN OO AH QEYBI OO XUKUN
WAXEEY OGAADEEN INEEY SOOMAALI IS NACDEY IS DISHEY KALA QEYBSANTEY .
Reply »	Abgaal boy says:	November 22, 2013 at 12:21 am	Ilaah waa inoo soo celinkaraa cidamadii xooka dalka somaliya waase hadii somali tashato cuqdadana la iska saaro
Reply »	Samawade (Dhasheega Wamo) says:	November 22, 2013 at 2:27 am	Dagaalkii 1977 waxuu ahaa dagaal aay Somaliya ku qabsatay Ogadenya.
Waxuu u keenay shacabka reer Ogadenya khasaare badan oo aay ugu horreyso in aay gacanta Ogadenya ka baxday magaalo madaxdii Harer iyo Diridhaba iyo inaay Ogadenya noqoto meel aay SOmaliya madax furasho u heeysato!
Laga bilaabo dagaalkii 1977 Somaliya waxaay adoonsaneysaa shacabka reer Ogaadenya si toos ah iyo si dadbanba, SOmaliya waxaay qaateen intaas oo qabale oo aay leeyahiin reer Ogaadenya, Somaliya waxaay badashay magacii Ogadenya ee aduunka oodhan ku yaqaaney ayaga oo u bixiyay magac faalisa ah(Somalia Galbeed,kilil 5,dhulka SOmalidu dego IWM)
Somaliya waa kuwa habeen iyo maalin u taagan inaay Ogadenya u gumeeystaan si dadban ayaga oo iska dhigaaya walaal SOmali ah.
SOmaliya waa kuwii bixiyay magaca “Leego” si aay u fashiliyaan guulahii aay ONLF ka soo hoyisay Ogadenya, Somaliya waata aay Ogadenya ka xorobiladahay, runtuna waataa.
Marka waxaan ka codsaneynaa hadaan nahay indheer garadka reer Ogaadeenya inaan nalaga danqin boogtii uu nagu reebtay dagaalkii 1977, kaasoo aay Somaliya Ogadenya ugu qabsatay si dadban.
Waad la wada socotaan in shacabka reer Ogadenya oo aan aqoon khayaamo in lagu yiri walaalahiin baanahaye ladagaalama Ethiopia anagaa ina caawin, markii shacabka reer Ogadenya aay qoriga qateena waan wada ognahay waxii aay SOmaliya sameeysay ” Somaliya oodhan oo Ethiopia la heshiiyay sidii dhulak reer Ogadenya loo qaato shacabka reer Ogadenyana looga ciribtiro Ogadenya. SOmaliyana aay Xabad ku bilaabtay shacabkii reer Ogadeenya
“Mar idage allaha dago,marlabad idage waa aniga iyo dadnibo xumideey”
Shacabka reer Ogadenya waay kala barteen cadowgooda iyo walaalkooda, shacabka reer Ogadenyana diyaar uma ah in aay Somaliya mar kale dabin kurito.
Walaalayaal reer Ogaadeenya waxaay Ethiopia ka xoroobi doontaa markii aay SOmalida kale ka xoroowdo Ethiopia, marka walaalayaal sheekadu waxaay ku dhantahay Somaliyeey Ogaadeenya reer Ogaadeenyaa iska leh kana tashan markeey ka xoroobiye adigu ka xoroow marka hore Ethiopa!!!!!!
Reply »	wadani from jawiil says:	November 22, 2013 at 8:19 am	samawade ogaden ma cirkow kaso dhacay somali soma ahan waa maxay somaliya igumesatay yaab waa in dib lofiriya yaa bixiyay magacan ogadeniya dhulka somali ee maqan inlasii gumeesto magacana saciday
Reply »	Garoowe me says:	November 22, 2013 at 10:59 am	To sama wade boowe haddi aanu nahay bahwaynta daarood wax aan idiin qaban karayno ma jiraan aragtidana dunidoo dhan ayaan il gaar ah ku fiirinayso daarood walaalahood ogaden ama saad utaqaanee dds ama kilil 5 aad ayay oogu bukaan khaladna inaad naga fahantan maahan txn
Reply »	Matabcade says:	November 22, 2013 at 1:13 pm	Groowe haddad daarood wax u qabaneysid ama u qaban kartid dhulbahante ood isaaq ka iibsatay ayaa wax u qaban laheyd. Dhulos isaaq ayaad siiday si adiga kuu nabad geliyaan. Ogaadeena waa kuwii aad itopia u gacan gelin jirtay´.
Reply »	jowhar boy says:	November 22, 2013 at 1:25 pm	War waxan arag maalinto dhashay ila maanta gumeeysi ayu kujira hoyada nacala kuyaaal somalia ithopia waxeey ula dagashay inaat adinka xur noqotaan e dan gaar ah o ay somalia kaledahay ogadenia majirto war waxan ogadeniya la dhahaayo yaan wax axsan ah losameen ha idin wasaan tikreka iyo cafarta hoyadana wase
Reply »	Garoowe me says:	November 22, 2013 at 1:45 pm	2 matabcade ptland nin ogaden ah ethiopia kamaysan iibin doqon yahay fadhiidka ahi arintaasna waxaa sameeyay waa maamul uu madax ka ahaa faroole ee waxaad ogsoonaataa xumaantii faroole uu suubiyahay inaysan bahwaynta sharafta leh ee mj aysan walaaladood ogaden wax xumaan ah ku soo kordhinayn madaxda danbaana saxaysa arinkaas
Reply »	dhahar boy says:	January 21, 2014 at 12:02 pm	Subxanallah, wll hadaad u aragtay hiilkii iyo damqashadii aan kuu damqanayey aan islahaa wllkaa cadowga ka rid, inaan ku gumeysanayo iyaduna waa arin kale, lkn waxaan kuu sheegayaa oo xaqiiq ah inaan weli kuu damqanayo isha allah somali markuu cudurku ka baxo itoobiya dib loola xisaabtami doono ee niyada wanaaji, itoobiyana waxa la isaga dhicin karaa in allah la tala saarto iyo isku duubni maaha tira badni iyo reer galbeed xulufo laga dhigto.